Booliska Magaalada Garoowe ayaa qabtay Gaadhi siday Hub | maakhir.com
Booliska Magaalada Garoowe ayaa qabtay Gaadhi siday Hub
Garoowe:- Ciidamada Booliska ee Magaalada Garoowe ayaa maanta qabtay Raas iyo hubo fara badan kuwaasi oo lagu qabtay Gaadhi Nooca loo yaqaan waaraad waxana la sheegay in lagu soo waday dhanka Magaalada Bosaaso ee Xarunta Gobolka Bari, lama sheegeen meesha laga keenay hubkaasi, Boolisaka ayaa sheegay inay wadaan baadhitaan xoogan.
Taliyaha Booliska ee Magaalada Garoowe ayaa sheegay in ay qateen Hubkaasi ,ayna wadaan baaritaano kala duwan oo ku wadaan dadkii lugu qabtey hubkaan Sharci darada ah, isaga oo sheegay in hubkaasi si qarsoodi ah lagu soo galiyaya Deegaanka Puntland.
Taliyahaasi waxa uu sheegay inay hubkaasi ka qabteen meel bar kaanta rool ah oo ku taala duleedka Magaalada Garoowe,kuwaasi oo shiraac soo saaray hubkaasi xiligii la soo galinayay gudaha Magaalada Garoowe.
Warar is khilaafsan ayaa ka soo baxaya ,waxay wararka qaar sheegayaan in uu sheegtay Nin Ganacsade ah oo sheegaya in uu ganacsade ahaan uwatey halka warar kalena ay sheegayaan in siyaabo kale hubkaan loo watey oo Amaanka Puntland wax loogu dhimayay.
Maamulka Gobolka Nugaal ayaa sheegay inay wadaan baadhitaano xoogan oo ku aadan hubkaasi iyo Ujeedooyinkiisa loo watay iyo Asalkiisa meesha laga keenay, waxayna sheegeen inay warbaahinta war siinayaan goorta ay soo af jaraan hawl galkaasi.
« Xaflad loogu tala galay furitaanka Shirkada Isgaarsiinta ee Tellcom ayaa ka dhacaday magaalada Ceerigaabo
Dagaal ka dhacay Magaalada Ceel-Doofaar »